Xun: Isku Xidhka, Maamul, iyo Falanqaynta Xogtaada Suuqgeynta | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 12, 2019 Talaado, Nofeembar 12, 2019 Douglas Karr
Hal mashruuc oo aan kusii wado inaan u shaqeeyo mid ka mid ah macaamiishayda ayaa ah inaan dhiso dashboorro suuq geyn ah oo bixiya xog dhab ah si go'aan looga gaaro. Hadday taasi u fududahay, runti maahan.
Ma sahlana. Raadin kasta, bulsho, ecommerce, iyo gorfaynta waxay leeyihiin qaab u gaar ah oo lagu daba galo xogta - laga bilaabo macquulnimada hawlgelinta illaa soo noqoshada ama isticmaaleyaasha hadda jira. Intaas oo kaliya maahan, laakiin inta badan aaladaha sifiican ugama ciyaaraan riixitaanka ama u jiidaya xogta goobaha kale. Aynu wajahno… tartame sida Facebook uma dhisayo xiriiriye asal ah Google Data Studio si dadku ugu midoobaan xogtooda bulsheed iyo falanqaynta halkaas.
Barxad kasta oo weyn waxay leedahay wado lagu dhoofiyo xogta iyada oo loo marayo API-kooda, in kastoo, iyo waxaa jira aagag ka faa'iideysanaya tan si looga caawiyo ganacsiyada inay dhisaan sirdoonka suuq geynta.
Qalabka aan in badan ku qaatay waa Google Data Studio. Sirdoonka ganacsiga bilaashka ah, warbixinta, iyo dashboardka - qiimaha bilaashka ah lama garaaci karo. Nasiib darrose, maxaa yeelay waxaa iska leh Google, ma arki doontid ciyaartoy kale oo ku soo qulqulaya si ay u dhisaan xiriiriyeyaal lammaane ah oo xogtooda ah, in kastoo Natiijo ahaan, dhowr barnaamijyo dhinac saddexaad ah ayaa sii kordhaya. Mid ka mid ah waa Dhibaato.
Dhibaatadu waxay bixisaa saddex xal:
Dhibaatada Datatap - Ku xir xogta nidaamyo badan una dir meel kasta oo aad aadeyso adoo otomatigeynaya ururinta xogta, diyaarinta iyo hababka maaraynta.
Fahamka Adver - Dashboorrada loo habeeyay waxay ku siinayaan aragti guud oo waqtiga dhabta ah ee suuqgeynta iyo waxqabadka ganacsigaaga. Ku xir xogta saxda ah dashboorka saxda ah dadka saxda ah.
Cadaadiska PreSense - Adeegsiga Sirdoonka Cilmiga ah, PreSense waxay si firfircoon u soo bandhigtaa fursadaha ku habboon iyadoo ka faa'iideysaneysa barashada mashiinka iyo tirakoobka horumarsan. Adoo adeegsanaya ogaanshaha cilladaha, helitaanka xogta iyo bixinta talooyinka, shirkaduhu waxay beddeli karaan awoodda gorfaynta suuqgooda.
Ku xirnaaw oo la shaqee warbaahintaada oo dhan, suuq geynta iyo nidaamka ganacsiga e-commerce. Iyada oo marin u helka boqolaal ilaha xogta suuq geynta. Dhibaatadu waxay isu geynaysaa xog aad u kala fog oo ka timid qalab fara badan oo duulaya. Waxay isku darsadeen wax walba: min dhaqaale, illaa iib-iib iyo cimilada.
Dhibaatadu waxay awood kuu siineysaa inaad si qoto dheer u eegto dhammaan safarka macaamiisha sidii hore. Isku-darka durdurrada xogta ee hore loo qiyaasay si loo helo aragti guud oo dhammaystiran oo ku saabsan ganacsiga macaamiishaada.
Dhamaan xogtaada dhig farahaaga oo ka faa'iideyso kororka weyn ee waxtarka. Looma baahna inaad ka dhex wareegto meheradaha si loo helo xogtaada. Looma baahna in gacanta lagu sii diyaariyo xog ururin falanqeyn ah. Taabadalkeed, waxaad diirada saari kartaa khayraadkaaga si aad uhesho fikradaha cusub oo aad uga abuurto qiimo dheeri ah xogta.
Maalgashiga suuqgeynta xogta kexeysa waa aag ay shirkaduhu ku helaan faa iido weyn. Sida laga soo xigtay warbixin ka timid Kooxda Winterberry iyo Ururka Suuqgeynta Tooska ah ee Caalamiga (GDMA), oo ku saabsan 80% jawaab bixiyaasha u arag macluumaadka macaamiisha inay muhiim u yihiin suuqgaynta iyo dadaalka xayeysiinta.
Waa maxay Suuq-geynta Xogta?
Suuqgeynta xogta kexeysa waa habka lagu wanaajinayo isgaarsiinta calaamadaha ku saleysan macluumaadka macaamiisha. Suuqgeyaasha xogta kexeeya waxay adeegsadaan xogta macaamiisha si ay u saadaaliyaan baahiyahooda, hamigooda iyo dabeecadaha mustaqbalka. Aragtida noocan oo kale ah waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta istiraatiijiyad suuqgeyn gaar ah loogu talagalay soo-celinta ugu sareysa ee suurtagalka ah ee maalgashiga (ROI)
Daraasadda Xaaladda: Sida ay Mindshare u habeysay Isku-duwidda Xogta & Warbixinta Macmiilka
Mindshare Netherlands waa hoosaadka Nederlandka ee shirkadda caalamiga ah ee warbaahinta iyo adeegyada suuqgeynta. Iyada oo in ka badan 7,000 oo shaqaale ah oo adduunka oo dhan ah, Mindshare ayaa mas'uul ka ah aqlabiyad badan oo ka mid ah ololaha suuqgeynta ee GroupM iyo WPP. Si loo maareeyo culeyska intaas le'eg ee ballaaran, shirkaddu waxay muddo dheer baadi goob ugu jirtay aalad suuq-geyn xogta ah oo hagaajin kara xog ururinta, is-dhexgalka, iyo ka warbixinta macaamiisheeda. Hadafyadan ayaa hadda la gaadhay, iyada oo gacan laga helayo Xun.
Muhiim u ah suuq-geynta xogta-wadista casriga ah ayaa ah adeegsiga cabbiraadaha suuq-geynta ee jaangooyooyinka dhammaan marinnada warbaahinta. Qiyaasta waxqabadka suuqgeynta kanaalka ayaa la fududeeyay markii ay jirto qaab loo siman yahay dhammaan KPI-yada. Tani waxay hubinaysaa joogtaynta sida xogta loo qaabeeyey, iyadoon loo eegin meesha ay xogta ka soo jeedo.
Adverity waxay siisaa fursad ay ku abuurto ikhtiyaarro khariidado waaweyn oo aad u adag oo isku waafajiya dhammaan cabbiraadaha waxqabadkaaga si aad isbarbar dhig ugu sameyso tufaaxa tufaaxyada kale ee midaysan. Tani waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay ku daraan dhammaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah ama qaybaha xogta ee hal mitir ama cabbir, iyaga oo ka caawinaya inay sameeyaan go'aanno suuq-aqoon sare leh oo leh sirdoon mideysan.
Ballanso Demo Xun
Tags: xaraashidXog -ururinta adverityfahamka xaraashkaxayeysiiskaisku xiraha xogtailaha xogtasareistuudiyaha xogta googleiswaafajinka baxsanSnowflake
Tirakoobka Suuqgeynta Saameynta